Somalia: Al-shabaab oo Askar ku gowracday Gobolka Gedo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-shabaab oo Askar ku gowracday Gobolka Gedo
Kooxda Al-shabaab ayaa xalay duleedka magaalada Luuq ee gobolka Gedo ka kaxeystay labo ka mid askarta ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaa guryahooda.
Maleeshiya ka mida Al-shabaab ayaa askartan u kaxaystay baadiyaha iyagoo halkaa ku gowracay labadii askari ee ciidanka dowladda ka tirsanaa.
Gudoomiyaha Degmada Luuq Maxamed Xuseen Cismaan oo warbaahinta uga waramay sida ay waxa u dhaceen ayaa sheegay in askartan ay fasax u qaateen in ay maalmo la soo joogaan qoysaskooda oo deganaa 17-km mee u jirta magaalada Luul.
Gudoomiyuhu wuxuu sheegay in askartan aysan wadan qoryaha oo ay uga tageen xerada ciidanka ee magaalada Luuq, Maxamed uu tilmaamay in ciidamada dowladda ay dadaal ugu jiraan sidii kooxda Al-shabaab uga hortagi lahaayeen in marka kale falkan oo kale fuliyaan.
Kooxda Al-shabaab ayaa qaybo ka mid ah weli kaga sugan gobolka Gedo iyagoo weeraro iyo dagaal gaadma ah ku qaada ciidamada ku sugan gobolka Gedo.